မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် မှ ကြိုဆိုပါ၏။
မိတ်ဆွေ , ဒါဟာ သင့်ရဲ့ ဒီဖိုရမ်ကို ပထမဆုံး လာရောက်လည်ပတ်မှု ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး မေးနေကျမေးခွန်းများ ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဖိုရမ်မှာ ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုဖို့ ၊ ပြန်စာတွေရေးသားဖို့ ၊ သင်ကိုယ်ပိုင် ရေးသားချက်လေးတွေ တင်ဖို့အတွက် မှတ်ပုံတင်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်ပြီးတာနဲ့ ဖိုရမ်ရဲ့ မူလစာမျက်နှာမှာ ရှိနေတဲ့ ဖိုရမ်ခွဲများတွင် သင်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်ဖတ်ရှု ၊ ရေးသား နိုင်ပါပြီ။
..:: ကြေညာချက်များ ::..
အသင်းဝင်များ အားလုံး သိရှိ နားလည်ထားရမည့် စည်းကမ်းချက်များ ဖြစ်ပါသည်။သေချာစွာ ဖတ်ရှုပေးရန် လိုအပ်ပေသည်။
ဖိုရမ်အုပ်ချုပ်သူများမှ အသင်းဝင်များသို့ ရှင်းလင်းပြောကြားချက်များ ၊ ဆွေးနွေးချက်များ ၊ မေတ္တာရပ်ခံချက်များ ၊ အသိပေးချက်များ ကို ဤနေရာတွင်ဖတ်ရှုပေးရန်လိုအပ်သည်။
Best members of the month
ဖိုရမ်က အသင်းသားတွေ ဖိုရမ်မှာ လည်ပတ်ရတာ ၊ ဖတ်ရှုရတာ ၊ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ရတာ စသဖြင့်ပေါ့ အားလုံးအဆင်ပြေအောင် မသိမဖြစ် လိုအပ်တာလေးတွေကို ဒီမှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
..:: မိသားစုဝင်တို့အတွက် ::..
ယောကျာ်းလေးတွေက ဒီမှာ မိမိတို့ ပြောပြနိုင်သလောက် မိမိအကြောင်းလေး အကျဉ်းချုံးပြီးပြောပြပေးကြပါ။
မိန်းကလေးတွေကလည်း ဒီနေရာလေးမှာ မိမိတို့ ပြောပြနိုင်သလောက် မိမိအကြောင်းလေးတွေပြောနိုင်ပါတယ်။
မွေးနေ့ရှင် မြန်မာမိသားစုဝင်တွေအတွက် ကျန်တဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေက ၀ိုင်းဝန်းဂုဏ်ပြုကြမယ့် နေရာလေးပါ။
..:: ကွန်ပျူတာနယ်ပယ် ::..
Applications, Operating Systems & E-books များကို ဒီမှာ ဒေါင်းလုဒ် ယူနိုင်ပါတယ်
Linux များ (သို့) Linux နှင့်ဆိုင်ရာများ
Linux OS များအကြောင်း ဆွေးနွေးရန်နေရာပါ.. Linux OS အသုံးပြုပုံများ.. တွေ့ကြုံရသည့်အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးဝေမျှထားသည့်နေရာဖြစ်သလို သင်ကိုယ်တိုင်လည်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်.
Hardware များအကြောင်း နှင့်အသုံးဝင်ပုံ၊အသုံးချပုံများ ဆွေးနွေးထားတဲ့နေရာဖြစ်သလို ရင်ဆိုင်ရသည့်အခက်အခဲများကို ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းဆွေးနွေးထားသည့်နေရာဖြစ်ပါသည်..
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ထွက်ရှိသောနေသော Software အသစ်များအကြောင်း ၊ လက်ရှိအသုံးပြုနေသော Software များအကြောင်းနှင့် အသုံးချပုံများအကြောင်းဆွေးနွေးထားသည့်နေရာပါ..
Network ဆိုတာဘာလဲ? Network များအကြောင်း ဆွေးနွေးထားသော နေရာဖြစ်ပါသည်.
Windows OS အကြောင်း ဆွေးနွေးထားသော ဆွေးနွေးချက်များ ကိုလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်သလို ကိုယ်တိုင်လည်း ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်...
မိမ်ိတို့သိသလောက် အောက်ပါအကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးကြဖို့ပါ။
Virus & Anti-virus ပိုင်းဆိုင်ရာ
..:: ဆေးပညာနှင့်အင်ဂျင်နီယာကဏ္ဍ ::..
" အာရောဂျံ ပရမံ လာဘံ " တဲ့။လူသားတိုင်းအတွက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ အခြေခံ အချက်ကြီးအကြောင်း တစေ့တစောင်း ပြောကြ ၊ ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။
အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ - ၁
အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ - ၂
အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာ - ၃
Mobile Phone များနဲ့ ပက်သက်ပြီး မိမိတို့သိသလောက် ဆွေးနွေးကြဖို့၊ အခက်အခဲများကို ၀ိုင်းဝန်းဖြေရှင်းကြဖို့ နေရာလေးပါ။
..:: လူငယ်သဘာဝ ဂိမ်းလောက ::..
ကွန်ပျူတာဂိမ်းတွေကို ဒီမှာ ဒေါင်းလုဒ်ချ ကြပါ။ မိတ်ဆွေတို့မှာ ရှိတာလေးတွေကိုလည်း တင်ပေးကြပါ။
ကွန်ပျူတာဂိမ်းတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီင်္း မိမိတို့သိသလောက် ဆွေးနွေးရအောင်။တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အတွေ့အကြုံချင်း ဖလှယ်ကြတာပေါ့။
..:: မြန်မာမိသားစုစာအုပ်စင် ::..
အသင်းဝင်များ မြန်မာစာအုပ်စာပေများကို လွယ်ကူစွာ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်အောင် ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သုတ ရသ စာအုပ်များ တိုက်ရိုက်ရေးသား မျှဝေရန်
..:: ၀တ္ထုတိုနှင့်ဆောင်းပါးများ ::..
မြန်မာဝတ္ထုတိုများ ၊ ဘာသာပြန် ၀တ္ထုတိုများ ၊ ဆောင်းပါး များကို စာရေးဆရာအလိုက် ခေါင်းစဉ်တွေ ခွဲပြီး တင်ပြပေးထားပါတယ်။
မြန်မာဝတ္ထုရှည်များ ၊ ဘာသာပြန်ဝတ္ထုရှည်များကို ဒီနေရာမှာ စာရေးဆရာအလိုက် စီစဉ်တင်ပြပေးထားပါတယ်။
..:: ကာတွန်းနှင့်ဟာသ ::..
ကာတွန်းစာအုပ် ၊ ဟာသစာအုပ်များကို ခေါင်းစဉ်အလိုက် ၊ စာရေးဆရာအလိုက် တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
စာရေးဆရာတွေရဲ့ ကဗျာစာအုပ်များ ၊ ကဗျာပေါင်းချုပ်များ ၊ လုံးချင်းကဗျာများကို စာရေးဆရာအလိုက် တင်ပြပေးထားပါတယ်။
..:: ဂျာနယ်နှင့်မဂ္ဂဇင်း ::..
ဂျာနယ် ၊ မဂ္ဂဇင်း စတာတွေကို နာမည်အလိုက် အစီအစဉ်တကျ တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
..:: ရုပ်ရှင်နှင့်ဂီတ ::..
မြန်မာမိသားစု ရုပ်သံကဏ္ဍသစ် အနေနဲ့ ဒါရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သော စနစ်ဖြင့် ရုပ်ရှင်ကားများကို တင်ဆက်သွားပါမည်။
နောက်ဆုံးထွက် မြန်မာရုပ်ရှင် ၊ နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင် တွေကို ဒီမှာ Download လုပ်ပါ။
မြန်မာသီချင်း ၊ နိုင်ငံခြားသီချင်း စုံလင်စွာ ရှာဖွေတင်ဆက် ပေးထားပါတယ်။
ရုပ်ရှင် ၊ ဂီတ လောက
ရုပ်ရှင် ၊ သီချင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေး ပြောကြားချင်တာရှိရင် ဒီမှာပြောကြားနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ နေထိုင်ကြရတဲ့ မြန်မာတိုင်း မိခင်တိုင်းပြည်ကို လွမ်းဆွတ်ကြမှာပါ။ အလွမ်းပြေ ရင်ဖွင့်စရာ နေရာလေးပေါ့။
မိမိတို့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ ၊ သာသနာ အကြောင်းကို အချင်းချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ ဆွေးနွေး တိုင်ပင်ကြ ၊ မျှဝေကြဖို့ နေရာလေးပါ။ ဘာသာ အားလုံးကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးလို့ ရပါတယ်။
မိမိတို့ရင်ဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ဘ၀အတွေ့အကြုံ လေးများကို ဖလှယ်ကြဖို့နေရာလေးပါ။
ဘ၀မှာတွေ့ကြုံရတဲ့ အခက်အခဲတွေ ၊ စိတ်ပင်ပန်းဖိစီးမှုတွေကို ပြောပြရင်ဖွင့်ချင်ရင် ဒီနေရာလေးမှာပြောကြပါ။ ကျန်တဲ့သူတွေကလည်း စိတ်ညစ်နေသူကို အားပေးကူညီကြပါ။ သူတပါးကို ကူညီရာရောက်တာပေါ့။
အတိအကျ ခေါင်းစဉ်တပ်၍ မရသော ဆွေးနွေးမှုများကို ဤကဏ္ဍတွင်ပြောကြားနိုင်သည်။
ဒီနေရာလေးမှာ အသင်းဝင်တွေက မိမိတို့ ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်များဖြစ်တဲ့ ကဗျာ ၊ ဆောင်းပါး ၊ ၀တ္ထု ဘာသာပြန် စတာတွေကို ရေးသားတင်ပို့နိုင်ပါတယ်။
အတိအကျ ခေါင်းစဉ်တပ်၍မရသော အခြား သိမှတ်ဖွယ်ရာများ ကို ဤကဏ္ဍတွင် ရေးသားဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။
စိတ်ပါဝင်စားသူများ သင်တန်းတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဂီတအခြေခံနှင့် ဘာသာစကားများကို သင်ကြားပို့ချပေးမှာပါ
မြန်မာမိသားစုဂျာနယ် ထုတ်ဝေရေးအတွက် အထွေထွေကိစ္စများ၊ ပြန်ကြားချက်များ၊ စာမူကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်သွားမယ့်နေရာလေးပါ။
လအလိုက် အကောင်းဆုံးဆွေးနွေးချက်များ နှင့် အကောင်းဆုံးမျှဝေသူများကို ရွေးချယ်သွားမယ့် နေရာလေးပါ။
..:: ဖက်ရှင်ကျကျ အလှအပ ::..
ကိုကိုကာလသားများ ဆိုက်ပေး ဂိုက်ပေး ကောင်းလာစေဖို့ ဒီနေရာလေးမှာ မျှဝေကြစို့။
ခောတ်မှီပြီး ယဉ်ကျေးလှပတဲ့ မြန်မာအမျိုးသမီးငယ်လေးများ ဖြစ်အောင် ၊ စတိုင်ကျကျ ၀တ်တတ်စားတတ်အောင် ဒီနေရာလေးမှာ မိန်းကလေးတွေက စုပေါင်းတိုင်ပင်ကြပါ။
..:: အားကစားနှင့်သတင်းပဒေသာ ::..
အရှိန်အဟုန်မြင့်မားစွာ အောင်မြင်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဘောလုံးအားကစား အပါအ၀င် အခြားသော အားကစားနည်းများ အကြောင်း တဦးနဲ့ တစ်ဦးပြောကြ ဆွေးနွေးကြတာပေါ့။
အလုပ်အကိုင် ရှာဖွေနေသူတွေ ၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား အလိုရှိသူတွေကြား ပေါင်းစည်းပေးမယ့် နေရာလေး တစ်ခုပါ။
မိတ်ဆွေ ရှာနေတဲ့ applications တွေကို မတွေ့ရင် ဒီမှာတောင်းဆိုခဲ့ပါ။
လိုချင်တဲ့ Game ကို ဖိုရမ်မှာ မတွေ့သေးရင် ဒီမှာ တောင်းဆိုခဲ့ပါ။
Crack နဲ့ Serial တွေလိုနေသလား
ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်က ဒေါင်းလုဒ်ချထားတဲ့ Serials,Cracks ဖိုင်တွေ ၊ ရှိပြီးသား applications တွေက Serials,Crack ဖိုင်တွေ အလုပ်မလုပ်ရင် ဒီမှာတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
E-Books နဲ့ Tutorials တွေလိုအပ်ရင်
မိတ်ဆွေရှာရခက်နေတဲ့ E-books,E-learnings စတာတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါ။
ခေါင်းစဉ်ရှာမရတဲ့ တောင်းဆိုချင်တာမျိုး ရှိရင် ဒီမှာ ပြောခဲ့ပါ။
..:: အကူအညီယူရင်းအကြံပြုကြမယ် ::..
မိတ်ဆွေတို့ ဖိုရမ်မှ download လုပ်ရာမှာဖြစ်စေ ၊ ဖတ်ရှုရာမှာဖြစ်စေ ၊ ဖိုရမ်က ပေးတဲ့ applications တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ဖြစ်စေ ဒီမှာ လာရောက် ပြောကြားနိုင်ပါတယ်။
မိမိတို့ ကြုံတွေ့ရသော ကွန်ပျူတာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ အခက်အခဲ အသီးသီးအား ဤနေရာတွင် ပြောပြ အကူညီတောင်းခံ နိုင်သည်။
ကျွန်တော်တို့ ဖိုရမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြံပေးချင်တာ ၊ ဆွေးနွေးချင်တာ ၊ ကူညီချင်တာများ ရှိရင် ဒီမှာ ပြောခဲ့ပေးပါ။
..:: ဖိုရမ်အမှိုက်ပုံး ::..
ဖိုရမ်ဝင်ခွင့် ပိတ်ခံရသူတွေရဲ့ ပို့စ်တွေ ၊ ဒေါင်းလုဒ် လင့် အလုပ်မလုပ်တော့တဲ့ ပို့စ်တွေ ၊ အကျိုးမရှိဘူး ဆုံးဖြတ်ခံရတဲ့ ပို့စ်တွေ အားလုံးကို ဒီမှာထားပါမယ်။
These are the 149 most used thread tags
ခံစားချက် စံပီး မျိုးသူရ သီချင်း ဟာသ ဓာတ်ပုံ အဆိုတော် ဆောင်းပါး ဇေရန်ပိုင် တြိစက္ခ မြန်မာ font 3ds max 32 bit 64 bit andriod android android content android on pc anonymous antivirus babylon backtrack backup bar code beauty & lifestyle bios blackberry bookmark bootmgr burning camera ccsm cctv copy cdma internet chinese font chinese ime chinese keyboard chkdsk czech dictionary disposable email dns drivers dropbox easy reading ebook ebooks english extra@englih extra english facebook fan error fedora firefox firmwarefkey flash flash tutorial folder hide font problem fonts fring fujitsu s6410 function key gmail google earth google myanmar gsm internet hacker hacking hacking ebook hacking magazine hairstyle hard disk hibernate hiren htc html httrack ie9 internet explorer internet phone iphone itunes kon boot language laptop repair lifestyle linux ebooks linux partition livecd macbuntu memory microsoft office mobile os movie reviews mp3 logo mp4 myanmar myanmar2 nero netbook nokia pc suite notebook offline opendns partition password recovery pc security pdf putty ram record desktop recycle.exe recycler virus remastersync repairing rynga sang pi screen recorder shorten url sim card sleep software ssh ubuntu ubuntu offline usb partition user account viber virus vmware vpn warcraft web to pdf wikipedia window8 window bluetooth window media player windows windows7windows7backup windows7dvd windows7loader windows7repair disc windows genuine windows guide wmp xampp zawgyi 15
လက်ရှိ ဖိုရမ်သို့ ၀င်ရောက်နေသူများ:7(အသင်းဝင် 1 ဦး ၊ ဧည့်သည်တော်6ဦး)
ဖိုရမ်သို့ အများဆုံး ၀င်ရောက်ခဲ့သောဦးရေ 258, 04-10-2012 at 05:50 AM
ယနေ့တွင်ဖိုရမ်သို့ မှတ်ပုံတင်သူဦးရေ : 8
ဈာန်ရဲထက် , အိုင်တီ ရူး , နေခြည်သွေး , မောင်ရဲဖြိုး , arkar moe , cyberzwe , linnmyat , ulhmnc အောက်ပါ အသင်းဝင်များသည် လွန်ခဲ့သော ၂၄ နာရီအတွင်းက ဖိုရမ်သို့ လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့သူများ ဖြစ်သည်။ 89 $ညိုမင်းလွင်$, ဈာန်ရဲထက်, ဆလိုင်းသန့်ဇော်ဝင်း, တာတာ, ဖူးလေး, ဘိုရာ, မမထွန်းထွန်း, မူယွန့်, ယမင်းထွဋ်, လက္ခဏာ, ဟိန်းသူအောင်, အကစ်(စ်), အိမို, အိုင်တီ ရူး, ကျော်တိုး, နေမင်းသွေး, နေခြည်သွေး, မောင်ကီး, မောင်ထက်, မောင်ရဲဖြိုး, အောင်ဗလ, ဝေမင်းခေါင်, မြင့်မိုရ်, ကြက်ဥခေါက်မုန့်, နှင်းပပရွှေ, ahchan, apri, ariallin, arkar moe, arkaraung, aungmin2010, Black Spider, bluefresh, chawonnlwin, chithtoo, chitthawkabarmyae, cyberzwe, decemberdec, Empathlover, FollowITBoy, g00gle, gido, hamster.boy, heainhtunoo, Hlwamkoko, htainlinnmann, htinaung58, htun30, icerockstar, july, kaung kin lu, Khaing Lay, ko lin, laypayay, leolay, linnmyat, loverlay, MA MA THU THU LAY, Min Khant Kyal, minthike, minthumon, nay nyo yi, pannuko, petpmm, phoelapyaee, phyothuhein, PINESOE, powerlight02, PyaitSone, riverboy, Set Paing Kyaw, silversky, soezarni2000, tu tu, tytzzmn, ulhmnc, waiyanzarni64, whiteman, winnaing, Yadana, yanhtunnaing, yehan, ykh htet, zaw myint naing, Zin Ko
မြန်မာမိသားစုဖိုရမ် ၏ လက်ရှိ အခြေအနေများ
အသင်းဝင်သစ် cyberzwe အား မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါ၏။
ယနေ့တွင် ကျရောက်သော မွေးနေ့ရှင်
moe cho, တီဘွား (28), LetThwe, မစုမွန်လေး သို့ ဓနုမလေး